Otu esi enweta ụgbọ mmiri dị ọnụ ala | Akụkọ Njem
Maria | | Cruceros, njem
Cruises bụ a ezumike nhọrọ dị ka ọ bụla ọzọ. Site na otutu oge ezumike na ohere ị ga-eleta ọtụtụ ebe n'otu oge n'ụgbọ mmiri jupụtara n'ihe eji enyere ndụ aka, a na-arafu ọtụtụ ndị njem site n'echiche nke ibi ndụ ahụmịhe nke ịme otu. N'oge gara aga maka ọtụtụ ndị mmadụ njem site n'oké osimiri bụ ihe okomoko ma taa njem dị n'etiti onye ọ bụla njem.
Ọ bụrụ n ’ezumike gị ọzọ ị ga - achọ iji ụgbọ njem, echefula aro ndị a iji chọta ụgbọ mmiri dị ọnụ ala.
1 Oge irughari na oge
2 Crugbọ mmiri na ụgbọ elu gụnyere
3 Akwụkwọ tupu oge eruo
4 Akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ mbupu
5 Inslọ ndị a kwadoro
Oge irughari na oge
Ihe mbụ ị kwesịrị itinye n'uche iji chọpụta njem dị ọnụ ala bụ ebe ịchọrọ ịga na ụdị ụgbọ mmiri ịchọrọ ịme, n'ihi na ọ bụghị otu ịnwe njem nke ụbọchị ole na ole karịa ịme njem otu. ma ọ bụ izu abụọ. N'otu aka ahụ, anyị ga-eburukwa n'uche oge ụgbọ elu dị elu na nke dị ala, nke daberekwa n'ebe anyị ga-eme ya: Mediterenian, Caribbean, ugwu Europe, Bermuda, Alaska, wdg.
Mgbe ụfọdụ, iji chọta ndị njem ụgbọ mmiri ọhụrụ, ụlọ ọrụ njem na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-enye onyinye pụrụ iche nke na-agunyekarị ego maka ntinye akwụkwọ n'oge, ngwugwu ihe ọ ,ụ drinksụ gụnyere ma ọ bụ enyi na-akwụghị ụgwọ. Onyinye ndị ọzọ nwere ike ịbụ ịnye njem mmụta na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ego ole ị ga-emefu n'ụgbọ.
Zọ ọzọ ị ga - esi nweta ụgbọ mmiri dị ọnụ ala bụ ilegide anya na webụsaịtị nke ụlọ ọrụ na - ahụ maka ụgbọ mmiri na ndị njem na - amasị gị ka ha nwere ike bipụta onyinye na-atọ ụtọ n’ebe ahụ.
Crugbọ mmiri na ụgbọ elu gụnyere
Iji kwalite njem ndị chọrọ ụgbọ elu iji rute n'ọdụ ụgbọ mmiri, Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebu ụgbọ mmiri gụnyere ụgwọ ụgbọ elu na ndoputa nke ha site na ịpụ site na ọdụ ụgbọ elu kacha mkpa.
Nke a sụgharịrị, n'ọtụtụ oge, na iji ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-efe efe na ụgbọ elu ya na-akwụ ụgwọ ụgbọ elu yana ụgbọ elu dị ọnụ ala karịa ma ọ bụrụ na anyị ejiri aka anyị chọọ ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị ụfọdụ njem na ọpụpụ nwere nhọrọ a.
Iji chọta ụgbọ mmiri dị ọnụ ala, ọ kacha mma itinye akwụkwọ ozugbo enwere ike. A na-enyekarị onyinye dị ukwuu site na ndabara ọnwa atọ. Na mgbakwunye, n'ọnọdụ ndị a, ị ga-enwe nhọrọ ndị ọzọ ịhọrọ ụlọ na ịchọta ọnụahịa na uru dị ala n'ụgbọ mmiri. I nwekwara ike inweta ọnụahịa ka mma mgbe ị na-achọ ụgbọ elu ma ọ bụ njem na ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche.
Ọ nwekwara ike bụrụ ikpe na enwere onyinye oge ikpeazụ maka ụlọ a na-ereghị ere, ọnụahịa ya dị egwu ọ bụrụgodi na ime ha abụghị ihe ị ga-ahọrọ site na mbido mana buru n'uche ohere a n'ihi na ọ nwere ike kwesịrị ya.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ha meziwanye ọnụahịa ahụ mgbe edochara gị, gbalịa ka gị na ndị ọrụ njem njem gị kwurịta okwu ọzọ maka na ha nwere ike belata ya ma ọ bụ jiri gị rite uru dị n'ụgbọ mmiri ahụ.
Akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ mbupu
Ezigbo ego iji chọta ụgbọ mmiri dị ọnụ ala bụ ịdenye aha na akwụkwọ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ma soro ha na ibe mgbasa ozi gọọmentị ha. Nọmalị ha na-akọ onyinye pụrụ iche naanị maka ndị debanyere aha ma ọ bụ oge ole na ole iji wepụta nnukwu onyinye, ohere nke imeziwanye ụlọ, njem, wdg.
Inslọ ndị a kwadoro
Otu nhọrọ ị nwere njem ụgbọ mmiri dị ọnụ ala karịa bụ idobere steeti steeti echekwara, ọ bụ ezie na enwere ike ịmebe ohere a. N'ime ụdị ndoputa a, ịhọrọ ngalaba nke ụlọ ahụ mana enweghị ọrụ ọ bụla, ya bụ, onye njem ga-amata ụlọ ikpeazụ ya naanị izu ole na ole tupu ọpụpụ, ebe ị na-asọpụrụ ụdị na ụdị ọ họọrọ.
Na ọnọdụ a ị nwere ike ịchọta ọnụahịa mana ị nweghị ike ịhọrọ ọnọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enweghị ụlọ obibi nke ọkwa gị aka ekpe, ihe dị mma bụ na ha ga-akpalite gị na nke ka elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Cruceros » Otu esi enweta ụgbọ mmiri dị ọnụ ala